Hababka dayactirka mootada korontada ee baaskiilka
Bogga ugu weyn blog Hababka dayactirka mootada korontada ee baaskiilka
Taariikhda ： 2021-07-29 Qeybaha ：blog Muuqaalada ： 1,316 aragti
Waxaa jira afar qaybood oo waaweyn oo ah baaskiilka korontada ah: mooto, baytar, koontaroole, iyo xeedho. Waxay had iyo jeer loo tixgeliyey inay yihiin qaybaha udub -dhexaadka u ah tamarta iyo firfircoonida baaskiiladaha korontada, muhiimaddooduna waa caddahay.
Waxaa ka mid ah, matoorku waa bedelka korontada ee baaskiilka korontada, kaas oo tamarta korontada ee batteriga u rogaa tamar farsameysan oo kaxeeya wareegga giraangiraha korontada, taas oo u dhiganta mishiinka baabuurka. Waa inaad si fiican u daryeeshaa mootada markaad fuushan tahay, si uu gaadhigaagu si fiican kuugu qaado. Maanta, waxaan kuu sheegi doonaa ku saabsan dayactirka iyo taxaddarrada mootada korontada ee baaskiilka!
1. Dhammaan wareegyada iyo isku -xirka korontada ee matoorka korontada ee baaskiiladaha waxaa loo qaabeeyey oo lagu soo saaray hagidda xirfadlayaal. Isticmaalayaasha waa inaysan wax ka beddelin, haddii kale guuldarrooyin iyo shilal (oo ay ku jiraan cawaaqib xun sida shilalka dabka iyo taraafikada) ayaa dhici kara.
2. Markaad isticmaaleyso maalmaha roobka, ha u oggolaan in mootadu ku dhex socoto biyo qoto dheer, iskaba daa in biyaha biyuhu ka sarreeyaan meesha dhidibka xarunta taayirrada dambe; intaad isticmaaleyso, fiiro gaar ah u yeelo si aad u hubiso xajinta dhejinta mootada iyo fargeetada gadaasha dambe, haddii aad ogaato in lowsku dabacsan yahay, waqtiga ku dheji ama u kaydi dukaanka si aad u hubiso oo wax uga qabato.
3. Haddii matoorku kululaado (ka sarreeyo 90 ° C), sigaar cabid, ur u gaar ah, buuq aan caadi ahayn ama waxyaabo kale oo aan caadi ahayn, isla markiiba jooji qalliinka oo u dir bakhaar khaas ah si loogu daweeyo. Ha kala furin mootada keligaa.
4. Iska ilaali inaad ku waddo baaskiilada korontada culeys xad dhaaf ah, cadaadiska taayirka oo aan ku filnayn, ama meelaha dhaadheer oo dhaadheer, haddii kale matoorku wuu gubanayaa.
5. Waa in xarunta giraangiraha korontada aan la kulmin waxyeello xoog leh, oo baaskiilka korontada aan lagu qasbin inuu bilaabo marka la xannibo. Marka baaskiilka korantada aan la bilaabi karin xannibaadda darteed, ha ku soo laaban si joogto ah, oo bilow mootada ka dib markaad ka saarto sababta keentay xiritaanka baaskiilka korantada.
6. Kuwa ku rakiban matoorada silsiladda, xusuusnow inaad mar walba silsiladda ku darto saliid saliid. Tani kaliya ma yareyn karto duugista qaybaha gudbinta, waxay sii dheereyn kartaa noloshooda, laakiin sidoo kale waxay yareyn kartaa buuqa gudbinta.
1. Markaad isticmaaleyso baaskiilka korontada, guud ahaan uma baahnid inaad dayactirto oo aad dayactirto qaybaha gudaha ee mootada. Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah siiso si aad u hubiso heerka xirayaasha xarigga korontada ee ku rakiban fargeeto dambe. Haddii aad hesho wax miro ah oo dabacsan, waa inaad si dhaqso ah u Adkee lowska ama weydii xirfadle inuu hubiyo oo wax ka qabto.
2. Marka matoorku joojiyo socodkiisa, ka saar boorka iyo wasakhda mishiinka waqtigiisa, ilaali nadiifinta mishiinka si looga hortago in saliidda iyo biyuhu soo galaan mootada, oo si toos ah biyo ha ugu buufin marka aad nadiifinaysid.
3. Hubi haddii siligga leedhka ee mootadu uu xoqan yahay iyo haddii uu jiro qaylo aan caadi ahayn marka mootadu socoto. Haddii loo baahdo, u dir bakhaarka si laguu daweeyo, oo weydii xirfadle inuu hubiyo oo wax ka qabto.
4. Haddii uu jiro matoor silsilad ah, silsiladda waa in si joogto ah looga buuxiyaa saliid saliidda.
Marka la soo koobo, waa inaan si wanaagsan u daryeelnaa mishiinka korontada ee baaskiilka, si Baaskiilada korantada sii dheeraan karaa.
Haddii aad xiiseyneyso baaskiil koronto, waad nala soo xiriiri kartaa. www.zhsydz.com.
Tags:matoorka korantada ee baaskiilka
Ka hor: 8 dhibcood oo loogu talagalay dayactirka baytariyada baaskiilka korontada ku shaqeeya
Next: Taariikhda horumarinta baaskiilada korontada